Ibhizinisi ledijithali - Psychology 2022
U-Irina Mushtina wazi konke nge-Digital. Uyi-CEO ye-CF.Digital, umsunguli wekomiti le-DDC, ilungu le-All-Russian Revolutionary Committee, isikhulumi se-Best Marketing Practice, ilungu lohlelo lwe-Google Elevator, kanye nomsunguli we-Grant Yalintsi Life social initiative.
Ngo-Okthoba 28, u-Irina uzoba ngomunye wezikhulumi engqungqutheleni ethi "Connecting Women" ebanjwe eKiev.
Sifuna ukukukhuthaza ezimpumelelweni ezintsha! Izikhulumi zethu zihamba phambili emkhakheni wazo. Bakulungele ukwabelana ngolwazi olubaluleke kakhulu nolwazi. Khumbula: usuku olulodwa nje lungashintsha impilo yakho yonke. Ungaphuthelwa! Ukuxhumanisa abesifazane - ukwabelana ngesipiliyoni, ukuhlanganisa izinhliziyo!
- Yebo, ngempela eminyakeni embalwa edlule wayebhekwa "ngowesifazane." Kubonakala kimi nanamuhla ngezinye izikhathi kubhekwa kanjalo. Kodwa lapho ngiqala ukukwenza, futhi lokhu kwakungo-2002, okungukuthi, cishe eminyakeni engu-16 edlule, ngakho-ke, ngombono wami, kwakungacaci nhlobo ukuthi hlobo luni lwendawo.
Impela. Kuze kube muva nje, sixhume ku-inthanethi ngocingo lwasendlini, sazama ukuvula amasayithi ngoxhumano oluhamba kancane kakhulu (ngikhumbula ukuthi lwalulude kakhulu futhi lubiza kakhulu - ngafika kubaba wami emsebenzini, ngaya lapho ngewebhusayithi ye-Yahoo - kwase kuba i-Google. namanje esingakaziwa ku-inthanethi, amakhasi afinyeziwe, agcinwe ku-DISKET !!!!! Futhi ngiye ekhaya ngiyofunda). Yebo, bekungaphambidlana impela. Kodwa hhayi kudala)))
Futhi ngo-2002 ngase ngenze iwebhusayithi yami yokuqala. Lezi kwakuyizifundo zokugcina zale nyuvesi, futhi ngokuyisisekelo, ngaya esifundweni sobuchwepheshe ngochwepheshe, sengiphothule izifundo zonyaka omude ukusuka ekuklanyweni kuye ezinhlelweni (yingakho mhlawumbe kwaba lula kimi ukwakha leli bhizinisi - ngaqonda konke izinqubo kuyo, futhi ingalawula ngokucacile umsebenzi weqembu, futhi lapho kudingekile ukuqinisa.Lo msebenzi, ngendlela, kancane wahlala nami manje. Kodwa kancane kancane, Yebo. Ngoba iqembu selivele likhulu kakhulu, futhi manje sinobuchwepheshe obuningi namasevisi amasha)
Futhi ngomthwalo wolwazi lwethiyori kanye nomsebenzi othile ongokoqobo wenyuvesi yami, ngangizoshada! Kubukeka sengathi, lokhu kuxhumene kanjani? Kodwa e-salon yezingubo zomshado, ngambona - esabekayo, ehlotshiswe ngamatshe, ingubo kanokusho yemali ehlanya -750 UAH. Futhi ngaya eVabank - nganikela ngokushintsha ingubo kusayithi! Kungaleyo ndlela, eqinisweni, ngesinye isikhathi, ngathola kokubili ibhizinisi nomndeni, futhi ngijabula kakhulu ngokuthi ngisenazo futhi ngiyaphelelisana!
- Ingabe kunzima ukuba intombazane enhle iphumelele? Mhlawumbe kulula kunokubi)) Yebo, uma ngikhuluma iqiniso, angazi - akukho engingaqhathanisa nakho. Angikaze ngizame ukuphumelela kunoma iyiphi enye indawo - impilo yami yonke bengizenzela eyami.
Iphumelela kangakanani? Kunzima futhi ukusho - ngoba kuya ngokuthi yiziphi izinkomba okufanele uziqhathanise. Uma siqhathanisa izinkomba zokuhlela / zokuphumelela ngokwezinkomba, yebo - ngizibona ngiphumelele. Konke engikuhlelayo - ngizuza konke. Manje sidinga ukuya ezingeni elilandelayo - hlela nakakhulu.
Futhi uma sikhuluma ngomhlaba wamadoda, khona-ke mhlawumbe nginenhlanhla, endleleni yami yebhizinisi ngahlangana nabantu abaphumelelayo, abahlakaniphe kakhulu abanamakhono abakholelwa kimi, ebhizinisini lami, futhi ngokubambisana okunjalo ngathola umjikelezo omusha. ukuthuthukiswa. Futhi bonke laba bantu, ngokuxakile, kwakungamadoda! Okusho ukuthi, uma ngifingqa, ngingasho ukuthi ngizizwa ngikhululekile emhlabeni wesilisa.
Yiziphi izimfanelo okudingeka ube nazo ukuze wakhe inkampani yakho?
- Ukwakha okuthile, hhayi nje inkampani, okokuqala, ngombono wami, udinga ukuba nokholo. Zethembe! Eqenjini lakho, emkhiqizweni wakho, kwabathandekayo bakho (ngemuva kwakho konke, ukuze wakhe umndeni, udinga futhi ukholo).
Futhi ngemva kokholo, kunesidingo sezimfanelo eziningi ezengeziwe. Ngokwesibonelo, positive. Kubonakala sengathi, lokhu kuthinta kanjani? Ngqo! Isimo sengqondo esihle sikuvumela ukuthi ubone amathuba. Futhi ngebhizinisi, lokhu kuyinto eyinhloko. Ngikholwa ukuthi lawa amandla ami - lapho abanye bedlula khona, ukubona amathuba nezinketho. Isiza ibhizinisi kakhulu. Futhi ngicabanga ukuthi lokhu kungathuthukiswa.
Kumele futhi ube nesistimu - awukwazi ukwakha lutho ngaphandle kwesistimu. Kufana nokwakha indlu ngaphandle kwepulani, amapulani, kanye nephansi elididayo ezindaweni. Lapha angikwazi ukuziqhayisa - leli khono lisenqubweni yokucija! Yeka ukuthi ngakha kangakanani ibhizinisi - umsebenzi omningi kulo! Akukho mkhawulo ekupheleleni !!!
- Yebo, ngizwa lokho kaningi. Ngaphezu kwalokho, uma sikhuluma iqiniso, lokhu kuvame ukuba njalo. Kodwa futhi nginezibonelo eziningi - lapho konke kuhlanganiswe ngokuvumelana. Phela, iphuzu liwukuthi - ngokuvumelana)).
Udinga nje ukwakha uhlelo oluzohlanganisa zonke izici zokuphila kwakho - umsebenzi, umndeni - umyeni, izingane, abazali, ukuzinakekela - ezemidlalo, ubuhle, ukuzijabulisa, ukuhamba, abangani. Futhi, njengasebhizinisini ngizama ukuphathisa ozakwethu, ngakho ekuphileni kwansuku zonke - ngidlulisela izinqubo ezithile. Ngeke ngikufihle ukuthi bayangisiza endlini nasenganeni.
Futhi iphuzu lesibili elibalulekile ukuthi udinga ukwazi ukuxoxisana. Futhi futhi, lokhu kubalulekile, emsebenzini nasempilweni. Indlela iyafana, abahlanganyeli nje abafani. Inhlonipho ngemibono nezimo zengqondo zabanye futhi uhloniphe indawo yomuntu siqu. Lokhu, mhlawumbe, into eyinhloko - nomyeni wami, futhi manje nendodana endala - wonke umuntu unendawo yakhe siqu, izithakazelo zabo siqu, izinto zokuzilibazisa. Akekho umuntu okweleta omunye utho, futhi senza okuthile komunye nomunye, hhayi ngenxa! Akukho mihlatshelo, akukho zinhlamba.
Futhi ukugebenga kwempilo yami encane - ukube besilwe, futhi uma ngiqinisekile ukuthi ngiqinisile, ngizolungisa kuqala! Lona umthetho wami - ukungalali ebusuku ngaphandle kokwenza ukuthula. Ekuseni isimo sibonakala sizinzile, umbuzo ngeke uphakanyiswe, kodwa i-sediment izosala!
Kimi kubonakala kunzima kakhulu - hhayi isinqumo sokuyivula! Futhi isinqumo (ikakhulukazi ekuqaleni) akufanele sishiywe. Ngiyazi izibonelo eziningi - lapho bemisa isinyathelo ngaphambi kwempumelelo! Ngakho-ke, noma uyeka, vele uthathe ikhefu, ubheke nxazonke, ucabange, uphefumulelwe futhi uqhubeke futhi!
- Ngikholelwa ngempela e-Ukraine. Nganginezipesheli eziningana, ezithakazelisa kakhulu, zokuthuthela kwelinye izwe. Ngibone ukuthi ozakwethu bahlala kanjani e-USA - bengilapho ohambweni lwebhizinisi isikhathi esingaphezu kwamaviki ama-2.
Ngeke ngigobe inhliziyo yami - iyaheha. Kodwa ngikholelwa ngempela e-Ukraine, ngoba ngisho noma ngezinye izikhathi kunzima futhi ngifuna ukuba ngowesifazane kuphela, ngiyeke, ngithi kahle, angifuni lutho, ngiyaqhubeka ngikholelwa futhi ngakha. Amandla amakhulu.
Ozakwethu e-United States kanye nozakwethu e-England bakholelwa ukuthi i-Ukraine inamathuba amahle kakhulu okuba, njengayo uqobo, ibe "isigodi se-silicon" eYurophu. Sinenqwaba yabafana abahlakaniphile, abadali, abaqalayo abanemibono ethakazelisayo newusizo.
Kodwa kunenkinga yomhlaba wonke - ukuxhumana kanye "nokupakishwa" komkhiqizo. Kulungile, futhi ngezinye izikhathi ngifuna ukusho - Futhi iphi i-cherry ekhekheni? Ngakho uyabuza !! Kodwa lokhu kuyalungiseka! Sesikuleyo ndlela futhi siya khona. Futhi iqiniso lokuthi abesifazane baya ngokuya beza kudijithali manje lihle kakhulu! Kubonakala kimi ukuthi abesifazane banale nkinga yokuphelela nje kowesifazane, okwengeza i-zest, ukuphelela nokuphelela. Yebo, futhi wengeze ubuhle !!!!
Ibhizinisi lenkanyezi: u-Anna Sedokova, uMax Barskikh nabanye benza kanjani imali ngaphandle kwesiteji?
Ibhizinisi elinjengowesifazane: indlela yokwakha ibhizinisi eliphumelelayo ngaphandle kokuzidela?
Abesifazane bayaphumelela njengabaholi, wulwazi olujwayelekile. Umlando wazi izibonelo eziningi ezicacile lapho osomabhizinisi abanamakhono bezuza impumelelo enkulu kwezamabhizinisi, benombono kuphela nesifiso sokuthuthuka
Ibhizinisi neChina: ungaqala kanjani futhi ungathola kuphi izimpahla ezingabizi?
Uma uphupha ukuqala ibhizinisi neChina, kodwa ungazi ukuthi ungabatholaphi abahlinzeki abathembekile, indlela yokukhetha umkhiqizo wekhwalithi waseShayina futhi uwulethe ngesikhathi esifushane kakhulu, khona-ke lesi sihloko singowakho
Ibhizinisi lomphefumulo: kulula futhi kunokwethenjelwa kangakanani ukuvula i-salon yobuhle?
Uke wasondela ukuze uvule ibhizinisi lakho? Ingabe ufuna ukwenza okuthile okujabulisayo emphefumulweni futhi ngesikhathi esifanayo uthole iholo elizinzile? Kukhona indlela yokuphuma. Vula isaluni yobuhle
Kunjani ukuqala ibhizinisi ngesikhathi sokuhlukaniswa: isipiliyoni somnikazi wenkonzo ye-Fasta u-Ksenia Prozhogina
Umsunguli wenkonzo "yokudla okuvela kumpheki" u-Fasta engxoxweni ekhethekile ukhuluma ngokuthi kunjani ukuqala ibhizinisi ngesikhathi sokuvalelwa yedwa, futhi wabelana ngezimfihlo zempumelelo yakhe